/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / Dapoxetine iHCL powder
SKU: 129938-20-1. Udidi: Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-molecular Formula: C9H7ClN2O5
Isisindo somzimba: 258.62
Ukuba ugqirha ukhetha le mveliso ukunyanga ukuhlaselwa kwangaphambili, kufuneka ahlolisise umngcipheko kunye nokuxhamla kwengxelo yegulane kwiiveki zokuqala ze-4 emva kokuba isilwanyana sisetyenziswe, okanye ukuvavanya umgca-mali wokufumana ingozi emva kokusebenzisa i-dose ye-6 yonyango kunye nokwenza isigqibo ingaba uqhubeke usebenzisa le mveliso.
Elinye ipilisi ngexesha elithile lingathathwa ngonaphakade. Isiza kufuneka sithathwe kwisisu esingenalutho. Kungcono ukusela itiye phambi kokusetyenziswa kakuhle phambi kokuba eli liyeza lilungele ukwenza inkqubo epheleleyo yokuhlola, kuxhomekeke ekuguleni kwabo kugqirha okanye kwi-pharmist kuxelelwe kwaye ukhuseleko lulungiswe ukuba lugwenywe ukusetyenziswa kakubi kweziyobisi, kodwa kungabi nenyusa ixesha lokusetyenziswa kweziyobisi ngexesha kufuneka ulandele amalungiselelo ogqirha kunye neentloni.
1. I zi khuselo. I-Dapoxetine isetyenziselwa kuphela izigulane zesilisa ezine-ejaculation engaphambi kwesikhathi. Ukhuseleko lweDapoxetine kumadoda angenayo i-ejaculation yexesha elide alicaci. Ngelo xesha, akukho datha malunga nomphumo weDapoxetine ngokulibazisa ukunyuka kwelo xesha. Kucetyiswa ukuba izigulane akufanele zithathe i-Beverly kunye "nezidakamizwa zokuzonwabisa" ngexesha elifanayo kuba umphumo awunakwenzeka kwaye iziganeko ezimbi ziyakwenzeka.